Jubbaland oo 9-qodob ka soo saartay xaaladda Gedo digniin iyo baaq caalami ahna dirtay – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 On Feb 16, 2020
Maamulka Jubbaland ayaa war-saxaafadeed kasoo saaray shir maanta ay iskugu yimaadeen xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaas oo ku sugan degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo, sida lagu sheegay war-murtiyeedka.
Kulankaas waxaa shir guddoominayey madaxweyne ku xigeenka kowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, waxaana la sheegay in diiradda lagu saaray xaaladda cakiran ee ka jirta gobolka Gedo, gaar ahaa magaalooyinka Beled-Xaawo, Dolow iyo Luuq oo lagu xusay war-saxaafadeedka.
Xubnihii iskugu yimid kulankaas waxay sheegeen in dowladda federaalku ay gobolka Gedo ka abuurtay xaalado ba’an, taasi oo sida ay sheegeen sababtay dhiig daatay, barakac, burbur hantiyeed, duminta hey’adihii dowliga ahaa ee Jubbaland, kuwaas oo ka dhisnaa gobolka Gedo.
War-saxaafadeedka laga soo saaray shirkaas ayaa lagu soo koobay 9 qodob, kuwaas mid mid loogu dul istaagay xaaladda guud ee ka jirta gobolka Gedo, iyadoo eedeymo culus qoraalkeeda ugu soo jeedisay dowladda federaalka.
Sidoo kale Jubbaland waxay labada gole ee baarlamaanka dalka, hey’adaha garsoorka, beesha caalamka iyo madasha xisbiyada qaranba ka dalbatay in lasoo fara geliyo xaaladda ka taagan gobolka Gedo, oo sida ay sheegeen isku bedeli karta mid uu ka dhasho cawaaqib xun.
“Dowlad goboleedka Jubbaland waxay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, dowlad goboleedyada xubnaha ka ah xukuumadda federaalka, madasha xisbiyada qaran, beesha caalamka, hey’adaha garsoorka dalka, intaba waxaan ugu baaqeysaa in ay soo fara geliyaan, xaaladaan murugsan oo hadii aan xal degdeg ah loo helin keeni karta dhibaato bini’aadanimo oo sal balaaran iyo dagaal sokeeye cidda kaliya ee ka faa’iideysana ay tahay argagixisada Al-Shabaab” ayaa lagu yiri qoraalka caawa kasoo baxay Jubbaland.
Ugu dambeyntii war-saxaafadeedka Jubbaland ayaa lagu yiri, “Waxaan u mahad celinaynaa Madasha Xisbiyada Qaran, beesha Caalamka iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee dareenkooda ka muujiyey falalka guracan ee xukuumadda federaalku ay ka wado Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo”.
Hoos ka aqriso sagaalka qodob ee ku xusan war-saxaafadeedka Jubbaland
Senator Ilyaas oo aad u dhaliilay siyaasadda dibadda ee MW Farmaajo kana hadlay arinta Somaliland